Izinja Zomhlaba Iwebhusayithi engaphansi kwe-AB Internet, lapho nsuku zonke kusukela ngo-2011 sikwazisa ngezinhlobo ze-canine ezaziwa kakhulu kanye nalezo ezingadumile kangako, ngokunakekelwa okudingeka ngamunye wabo, futhi, uma lokho bekungenele, ikunikeze amathiphu amaningi ukuze uthokozele umlingani wakho onemilenze emine kangcono nangcono.
Ithimba lokuhlela likaMundo Perros lakhiwa iqembu labathandi bezinja beqiniso, abazokweluleka noma nini lapho ulidinga noma nini lapho unemibuzo mayelana nokunakekelwa kanye / noma ukunakekelwa kwalezi zilwane ezinobungane ezithathwa njengomunye wabangane abakhulu beSintu. Uma unentshisekelo yokusebenza nathi, gcwalisa ifomu elilandelayo futhi sizoxhumana nawe.
Izinja yizilwane ebengihlala ngizithanda kakhulu. Ngibe nenhlanhla yokuhlala nabaningana kukho konke ukuphila kwami, futhi njalo, kuzo zonke izikhathi, isipiliyoni besingasoze salibaleka. Ukuchitha iminyaka ngesilwane esinjalo kungakulethela izinto ezinhle kuphela, ngoba zinikeza uthando ngaphandle kokucela ukubuyiselwa okuthile.
Kusukela ngineminyaka eyisithupha benginezinja. Ngiyathanda ukwabelana ngempilo yami nabo futhi ngihlala ngizama ukuzazisa ukuze ngibanikeze ikhwalithi yokuphila engcono kakhulu. Kungakho ngithanda ukusiza abanye, njengami, abazi ukuthi izinja zibalulekile, umthwalo okumele siwunakekele futhi senze izimpilo zabo zijabule ngangokunokwenzeka.
Umthandi omkhulu wezilwane nezinja ezinkulu ezifana namakhoba, kufanele ngizinakekele ngokuzibona zikude ngoba ngihlala efulethini elincane kakhulu. Umlandeli wezinja njengoSir Didymus no-Ambrosius noma uKavik, inja yempisi. Umphefumulo wami uyinja yaseBernese okuthiwa iPapabertie.
Bengihlala ngikhula ngizungezwe yizilwane ezifuywayo ezinjengamakati eSiamese futhi ikakhulukazi izinja, zezinhlanga nobukhulu obuhlukile. Bayinkampani enhle kunazo zonke engaba khona! Ngakho-ke ngamunye ukumema ukuthi wazi izimfanelo zabo, ukuqeqeshwa kwabo nakho konke abakudingayo. Izwe elijabulisayo eligcwele uthando olungenamibandela nokunye okuningi nawe okumele ukuthole nsuku zonke.
Ngingumthandi omkhulu wezinja futhi bengilokhu ngizihlenga futhi ngizinakekela selokhu ngangigqoke amanabukeni. Ngiyayithanda impela imijaho, kepha angikwazi ukumelana nokubukeka nokushukuma komzimba kwama-mestizo, engabelana naye impilo yami yansuku zonke.
Ngibe yivolontiya endaweni yokukhosela iminyaka, manje kufanele nginikele sonke isikhathi sami ezinjeni zami, ezingezimbalwa. Ngiyazithanda lezi zilwane, futhi ngiyakujabulela ukuchitha isikhathi nazo.
Umfundisi weCanine, umqeqeshi womuntu siqu futhi uphekela izinja eziseSeville, nginokuxhumana okukhulu ngokomzwelo nomhlaba wezinja, ngoba ngivela emndenini wabaqeqeshi, ababheki nabazalisi abangochwepheshe, ezizukulwaneni eziningana. Izinja ziyisifiso sami nomsebenzi wami. Uma unemibuzo, ngizojabula ukukusiza nenja yakho.